नेरुडे लघुवित्तको खुद मुनाफा २०८.८३ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि उछाल ! - Arthasansar
नेरुडे लघुवित्तको खुद मुनाफा २०८.८३ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि उछाल !
विहीबार, १६ बैशाख २०७८, ०७ : २२ मा प्रकाशित
नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म संस्थाको खुद नाफा २०८.८३ प्रतिशतले बढेर १५ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा संस्थाको यस्तो नाफा ४ करोड ९६ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा सिमित थियो ।
समिक्षा अवधिसम्म संस्थाको सञ्चालन नाफा २४ करोड ३३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा २०८.८३ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिसम्म संस्थाले ७ करोड ८८ लाख १३ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो ।
समिक्षा अवधिसम्ममा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी ४० करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिसम्ममा संस्थाले २५ करोड ६२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी कमाएको थियो ।
चुक्ता पुँजी ४९ करोड ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी ४१ रुपैयाँ ४० पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २१९ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ ।
#3rd quarter report
एनएमबि बैंकमा खाता छ ? हेर्नुहोस् बैंकको नयाँ व्याजदर